Ufuna ukuya umdla kule entwasahlobo? - Jomo Technology Co., Ltd
Power-ukunceda Kid Isithuthuthu
Self ukulingana scooter
Ufuna ukuya umdla kule entwasahlobo?
Spring uyeza kamsinya, angathanda ukuba aye uhambo ngalo naliphi na ixesha? Okanye sifuna ukuphuma nokuphonononga imihlaba ehlukene? Ingaba ufuna ukunika wena okanye usapho lweholide obukholekayo hetisekeke?
Ukuba impendulo ngu Ewe, nceda khetha ilanga ukuya ngaphandle, ngoko ke uya ukubamba ubuhle engalindelekanga ekupheleni uhambo lwakho.
Noko ke, kukho umbuzo, apho izinto zokuhamba ngaba ukhetha ukukhetha, moya okanye ukuqeqesha? Enoba ukhetha, xa uthe wafika indawo ekupheleni eluhambeni, kufuneka emihle i yothutho-mfutshane mgama. Kodwa leyo isixhobo zokuhamba-elifutshane kude eyiyeyona iphucukileyo?
Namhlanje, i skateboards zombane athandwa kakhulu amantombazana abaninzi abaselula kunye namakhwenkwe. Akubalulekanga nje sisixhobo lokuya emsebenzini olungileyo kodwa ngokwenene okunokutsalela ngayo amehlo abantu. China Koowheel 2 isizukulwana longboard yombane (brushless Dual hub-Motors) iye pack ibhetri replaceable, 2pcs Imiqulu battery unokuthatha 60km, yiya elide. Ngesantya oluqhelekileyo 30km / h, phezulu isantya 42km / h, yiya ngokukhawuleza. (ngokuxhomekeke ubunzima bomzimba nemeko yendlela) Ngapha koko, le yi Rubber yombane evunyiweyo zohambo Air, akunyanzelekanga ukuba ukhathazeke ngale ngxaki esinaleni konke konke.
Ukuba intombazana fashion okanye inkwenkwe, umbuyise Rubber zombane na indlela engcono. Ungaqala ukuhlola eli hlabathi ngalo naliphi na ixesha kwaye onwabele kwanobuhle endleleni. Wish unayo uhambo emnandi ezahlukileyo wamanzi.
ixesha Post: Feb-28-2018